Ejipta 24 Mey 2019
Ejipta 23 Mey 2019
Indonezia, mampiroborobo ny bilaogy tsara, imailaka feno fankahalàna ary ny Lokan'ny Biloagy Azia Blog Awards …………………. Fampitomboan'i Indonezia An'ireo Blaogy Tsara, Ireo Imailaka Mifono Fankahalàna Ary Ireo Blaogy Fanolorana An'i Azia
Azia Atsinanana 22 Mey 2019
Tao anatin'ireo taona roa farany, vavolombelon'ny firoboroboana tsy mitsahatra sy mahavelom-panantenan''ireo blaogy tsara sy ireo blaogera tsara kalitao. Ny anton'io, amin'ny ankamaroany, dia nohon'ny fitobak'ireo manampahaizana, mpanoratra ary mpanao gazety Indoneziana izay manomboka mampiseho ny fahalinan-dry zareo amin'ny blaogy.
Maninona ireo bilaogera no loza mitatao ho an'ny governemanta etiopiàna
Etiopia 22 Mey 2019
"Ny loza mitatao hita vatana amin'ireo Etiopiàna bilaogera sy mpanao gazety ary fanahy malalaka hafa dia noho izy ireo mampiditra hevitra radikaly tena vaovao be, hoe firenena iray malalaka kokoa, demaokratika kokoa."
Azerbaijan 21 Mey 2019
Karaiba 19 Mey 2019
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Mey 2019
Raharaha goavana momba ny zava-mahadomelina, Manasongadina ny fomba fanao feno fahendrena an'ny polisy ambony ao Trinidad & Tobago
Karaiba 13 Mey 2019
"Na dia maniry ny mifanohitra amin'izany aza isika, tsy valin'ireo valimbavaka ho antsika i Gary Griffith fa fambaran'ny tsy fahombiazantsika."
Tatitra Netizen: Manamafy Ny Fanarahamaso Vaovao Amin'ny Anaran'ny Fiarovana Nasionaly Ny Manampahefana Rosiana
Rosia 12 Mey 2019
Voatafika tao Makassar, Indonezia ny mpanoratra iray ato amin'ny Global Voices, manohy manenjika ireo mpampiasa tambajotra sosialy amin'ny alalan'ny lalàna mifehy ny heloka an-tserasera i Tanzania, ary Tapahan'i Singapaoro ny fidirana amin'ny Aterineto ho an'ireo mpiasam-panjakana
Hizara ny feon'ireo 50 mpikatroka ara-niomerika ho an'ny tenim-pirenena teratany ny hetsi-panentanana Twitter miodina mandritra ny taona iray
Amerika Latina 12 Mey 2019
Midira ao amin'ny Rising Voices satria mankalaza ny fahamaroana ara-teny mandritra ny Taona Iraisam-pirenena Natokana Ho An'ny Tenim-pirenena Teratany isika, miaraka amin'ny hetsi-panentanana Twitter izay mampitombo ny traikefan'ireo mpikatroka ara-niomerika ho an'ireo tenim-pirenena teratany any Amerika Latina.